အောင်သပြေကျေးရွာသား ထောင်တွင်းသေဆုံးမှု ဒဏ်ရာများတွေ့ရှိ၊ အာဏာပိုင်များက အရက်ကြောင် ကြောင်၍ သေဆုံးဟု ပြော - Cele Platform
အောင်သပြေကျေးရွာသား ထောင်တွင်းသေဆုံးမှု ဒဏ်ရာများတွေ့ရှိ၊ အာဏာပိုင်များက အရက်ကြောင် ကြောင်၍ သေဆုံးဟု ပြော
မန္တလေးခရိုင် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် အောင်သပြေကျေးရွာမှ မန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်းအထောင် အတွင်း အဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဦးထွန်းမြင့်ဝင်း (ခ) ဦးမောင်ထွန်း သေဆုံးမှုတွင် ဒဏ်ရာများ တွေ့ရှိရကြောင်း ၎င်း၏ အကိုဖြစ်သူ ဆရာတော် ဦးဝိမလက မိန့်သည်။
ထိုသေဆုံးမှု ဖြစ်စဉ်ကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းများက အရက်ကြောင်သောကြောင့် သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုထားကြောင်း ဆရာတော်၏ မိန့်ကြားချက်အရသိရသည်။
“ ဦးဇင်း ဒီမနက်ရုပ်အလောင်းကိုသွားကြည့်တော့ နားရွက်ကသွေးတွေထွက်နေတာတွေတွေ့တယ်။ လည်ပင်းမှာ လက်လေးလုံးခန့် ဒဏ်ရာရှည်တစ်ခုတွေ့တယ်။ နားထင်မှာ ရောင်နေတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ့ရတယ်”ဟု ဆရာတော် ဦးဝိမလက မိန့်ကြားသည်။
သေဆုံးသူ ဦးထွန်းမြင့်ဝင်း (ခ) ဦးမောင်ထွန်း ကို အောင်သပြေကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပွားသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် ဒေသခံတို့၏ ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ခဲ့သည့်ဟုဆိုကာ ဇွန်လ ၂ရက်နေ့ကရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၄၃၆/၄၄၀/၃၃၆/၁၁၄ တို့ဖြင့် ဖွင့်ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရုပ်အလောင်းကို လက်ရှိချိန်တွင် မန္တလေးဆေးရုံကြီး တွင်ထားရှိကာ လာမည့် ဇွန်လ ၇ရက်တွင် အောင်သပြေရွာ သုသာန်တွင် သဂြိုလ် သွားမည်ဟု ဆရာတော်က မိန့်ကြားသည်။
“ဦးဇင်း လူမှုရေးအရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ လူအခွင့်အရေးတွေ စော်ကားခံရတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့။ ဒီကလေးက အပြစ်မှလည်းမရှိဘဲနဲ့သက်သေလည်း မပြနိုင်ဘဲနဲ့ ဖမ်းဆီးခံရတာ”ဟု ဆရာတော် ဦးဝိမလက မိန့်ဆိုသည်.
အဆိုပါသေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်သွားရန်ရှိကြောင်း ဆရာတော်က ထပ်မံမိန့်ကြားသည်။
မေလအတွင်းက အောင်သပြေကျေးရွာရှိ Alpha ဘိလပ်မြေစက်ရုံ ဖျက်သိမ်းရေးတောင်းဆိုခဲ့ကြသော ဒေသခံများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေသခံအများအပြား ဖမ်းဆီးခံရပြီး အမှုရင်ဆိုင်နေရသည်။
အဆိုပါသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးတိုင်းသက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို ရန်ကုန်ခေတ်သစ်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းသော်လည်း တာဝန်ခံ ဖြေဆိုမည့် သူမရှိပေ။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ဦးသိန်းအောင်မြင့်ကမူ မန္တလေးဆေးရုံကြီး ရင်ခွဲရုံတွင် ရှိနေသော ဦးမောင်ထွန်း ၏ ရုပ်အလောင်းကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရာ ဓာတ်ပုံ ရိုက်ခွင့်မပေးဘဲ နားနှင့်ပါးစပ်တွင် သွေးကျနေသည်ကို မြင်တွေ့ရကြောင်း၊ ဘယ်ဘက်နားတွင်လည်း သွေးကျ နေ ကြောင်း၊ နံနက် ၁၀ နာရီကျော်တွင် ရင်ခွဲစစ်ဆေးကြောင်း သူ၏ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် တင်ထားသည်။
ဓာတ်ပုံ- မေလအတွင်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အောင်သပြေကျေးရွာသားများအကြား ပဋိပက္ခမြင်ကွင်း။www.khitthitnews.com
အောငျသပွကြေေးရှာသား ထောငျတှငျးသဆေုံးမှု ဒဏျရာမြားတှရှေိ့၊ အာဏာပိုငျမြားက အရကျကွောငျ ကွောငျ၍ သဆေုံးဟု ပွော
ရနျကုနျ၊ ဇှနျ ၆
မန်တလေးခရိုငျ ပုသိမျကွီးမွို့နယျ အောငျသပွကြေေးရှာမှ မန်တလေးအိုးဘိုအကဉျြးအထောငျ အတှငျး အဖမျးဆီးခံထားရသညျ့ ဦးထှနျးမွငျ့ဝငျး (ခ) ဦးမောငျထှနျး သဆေုံးမှုတှငျ ဒဏျရာမြား တှရှေိ့ရကွောငျး ၎င်းငျး၏ အကိုဖွဈသူ ဆရာတျော ဦးဝိမလက မိနျ့သညျ။
ထိုသဆေုံးမှု ဖွဈစဉျကို သကျဆိုငျရာအစိုးရအဖှဲ့အစညျးမြားက အရကျကွောငျသောကွောငျ့ သဆေုံးခွငျးဖွဈသညျဟု ပွောဆိုထားကွောငျး ဆရာတျော၏ မိနျ့ကွားခကျြအရသိရသညျ။
“ ဦးဇငျး ဒီမနကျရုပျအလောငျးကိုသှားကွညျ့တော့ နားရှကျကသှေးတှထှေကျနတောတှတှေတေ့ယျ။ လညျပငျးမှာ လကျလေးလုံးခနျ့ ဒဏျရာရှညျတဈခုတှတေ့ယျ။ နားထငျမှာ ရောငျနတေဲ့ ဒဏျရာတှရေ့တယျ”ဟု ဆရာတျော ဦးဝိမလက မိနျ့ကွားသညျ။
သဆေုံးသူ ဦးထှနျးမွငျ့ဝငျး (ခ) ဦးမောငျထှနျး ကို အောငျသပွကြေေးရှာတှငျဖွဈပှားသညျ့ ရဲတပျဖှဲ့ နှငျ့ ဒသေခံတို့၏ ပဋိပက်ခဖွဈစဉျတှငျ ပါဝငျခဲ့သညျ့ဟုဆိုကာ ဇှနျလ ၂ရကျနကေ့ရာဇသတျကွီး ပုဒျမ ၄၃၆/၄၄၀/၃၃၆/၁၁၄ တို့ဖွငျ့ ဖှငျ့ဖမျးဆီးအမှုဖှငျ့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ရုပျအလောငျးကို လကျရှိခြိနျတှငျ မန်တလေးဆေးရုံကွီး တှငျထားရှိကာ လာမညျ့ ဇှနျလ ရရကျတှငျ အောငျသပွရှော သုသာနျတှငျ သဂွိုလျ သှားမညျဟု ဆရာတျောက မိနျ့ကွားသညျ။
“ဦးဇငျး လူမှုရေးအရပွောရမယျဆိုရငျတော့ လူအခှငျ့အရေးတှေ စျောကားခံရတဲ့ ပုံစံမြိုးပေါ့။ ဒီကလေးက အပွဈမှလညျးမရှိဘဲနဲ့သကျသလေညျး မပွနိုငျဘဲနဲ့ ဖမျးဆီးခံရတာ”ဟု ဆရာတျော ဦးဝိမလက မိနျ့ဆိုသညျ.
အဆိုပါသဆေုံးမှုနဲ့ ပတျသကျပွီး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတဈခု ပွုလုပျသှားရနျရှိကွောငျး ဆရာတျောက ထပျမံမိနျ့ကွားသညျ။
မလေအတှငျးက အောငျသပွကြေေးရှာရှိ Alpha ဘိလပျမွစေကျရုံ ဖကျြသိမျးရေးတောငျးဆိုခဲ့ကွသော ဒသေခံမြားနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ကွား ပဋိပက်ခ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဒသေခံအမြားအပွား ဖမျးဆီးခံရပွီး အမှုရငျဆိုငျနရေသညျ။
အဆိုပါသဆေုံးမှုဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျပွီး မန်တလေးတိုငျးသကျဆိုငျရာ တာဝနျရှိသူမြားကို ရနျကုနျခတျေသဈက ဆကျသှယျမေးမွနျးသျောလညျး တာဝနျခံ ဖွဆေိုမညျ့ သူမရှိပေ။
တကျကွှလှုပျရှားသူ ဦးသိနျးအောငျမွငျ့ကမူ မန်တလေးဆေးရုံကွီး ရငျခှဲရုံတှငျ ရှိနသေော ဦးမောငျထှနျး ၏ ရုပျအလောငျးကို ဝငျရောကျကွညျ့ရှုရာ ဓာတျပုံ ရိုကျခှငျ့မပေးဘဲ နားနှငျ့ပါးစပျတှငျ သှေးကနြသေညျကို မွငျတှရေ့ကွောငျး၊ ဘယျဘကျနားတှငျလညျး သှေးကြ နေ ကွောငျး၊ နံနကျ ၁၀ နာရီကြျောတှငျ ရငျခှဲစဈဆေးကွောငျး သူ၏ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှငျ တငျထားသညျ။
ဓာတျပုံ- မလေအတှငျး ရဲတပျဖှဲ့နှငျ့ အောငျသပွကြေေးရှာသားမြားအကွား ပဋိပက်ခမွငျကှငျး။www.khitthitnews.com
သုံးစွဲရန်မသင့်သော အလှကုန်ပစ္စည်းများကို အများပြည်သူသိရှိရန် အသိပေး ကြေညာချက်
နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆)ရက်နေ့ မွန်းလွဲ (၂:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်)